भोलिदेखि पठाओ बन्द ! – Dainik Samchar
March 24, 2021 207
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले भोलि (बुधबार) देखि पठाओ सेवा सञ्चालन हुन नदिने जनाएको छ । पठाओका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या आएको भन्दै पठाओ चल्न नदिने जनाएको हो ।
पठाओले मोटरसाइकल र ट्याक्सी सेवा दिँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पठाओका हजारौँ प्रयोगकर्ता र राइडर छन् । पछिल्लो समय ट्याक्सी चालक र पठाओका बाइक राइडरबीच विवाद हुँदै आएको छ ।
ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले अनलाइनमार्ग डकटमसँग भने, “लुकेर चलाउँछन् भने बेग्लै कुरा हो । अन्यथा, चल्न दिँदैनौँ । सडकमा देखेमा कारबाही गर्छौँ । पठाओ राइडर सडकमा भेला हुँदा सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ ।”
अन्य समाचार : अब घरजग्गा किनबेच गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमा लागु भयो नयाँ नियम सरकारले घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिमार्फत घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा कर तथा राजस्व छली हुनुका साथै ठगीका घटना बढेको भन्दै ‘कम्पनी’ मार्फत मात्रै किनबेचको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
Prevथप तीन साता लकडाउन गर्ने निर्णय !
Nextज्वरो आउने, रिँगटा लाग्ने,बान्ता हुने समस्या धेरै देखीयपछि विद्यालय बन्द गर्न सरकारको निर्देशन